धान रोप्न गएकी ज्योति मगरले यसरी गरिन अङ्ग प्रदर्शन गरिन हेर्नुहोस न !! – Complete Nepali News Portal
धान रोप्न गएकी ज्योति मगरले यसरी गरिन अङ्ग प्रदर्शन गरिन हेर्नुहोस न !!
June 30, 2017	1,884 Views
काठमाडौं, १५असार । असारको महिना, किसानका लागि मानो रोपेर मुरी उव्जाउनुपर्ने समय । धान रोपाईको चटारोले किसानलाई छोपेको हुन्छ । त्यही चटारोले चर्चित गायिका ज्योति मगरलाई समेत छोपेको छ । उनी केहीदिन अघि भक्तपुरको खरीपाटीमा खेतामा काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिइन् । धान रोप्न उनी कामुक भएर पुगेकी थिइन् ।
मोडल समेत रहेकी उनी विभिन्न हर्कतका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । उनका गीत, म्यूजिक भिडियोमा अंग प्रदर्शन, स्टेजमा प्रस्तुती दिँदा उनले गर्ने हर्कत होस् या अन्तरवार्ता दिने उनको शैलीलेनै किन नहोस् उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनका थुप्रै गीत हिट गीतको सूचीमा छन् । यस्तै उनले दर्जानौं म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन् । जसमा उनको ड्रेसअपलाई लिएर थुप्रै चर्चा परिचर्चा भएका छन् ।
उनी धान रोप्न पनि हट भएर पुगेकी छन् । खासमा उनी भक्तपुर असार १५ धान दिवसका लागि फोटोसुट गराउन गएकी थिइन् । खेतमा उनले हट फोटोसुट गराएकी छन् ।
यो भिडियो हेरी सहयोग गरि दिनु होला !!